Items 1 to 16 of 10 total
Series 96H2 Articulator isanon-arcon type (condylar guidances associated with the articulator&#039;s lower member), which simulates the multiple functions of the Gleniod Fossa in centric, protrusive and right and left lateral positions. The enclosed track design of the guidance prevents vertical displacement of the condylar element when waxing or making excursive movements with the instrument.Semi-Adjustable, Non-Arcon Type Articulator. Asanon-arcon articulator, it is the most popular teaching and clinical instrument for removable prosthodontics.It has enclosed guidances; fixed inter-condylar width of 110mm and lateral adjustments from0degrees to 30 degrees and protrusive adjustments from0degrees to 75 degrees.It acceptsawide range of accessories including the Adjustable Incisal Guide. Articulator သည် သွားဆရာဝန်များအတွက် လူကြိုက်အများဆုံးသော သင်ကြားရေးနှင့်လက်တွေ့တူရိယာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။သေသပ်ခိုင်ခံ့သော၊ယုံကြည်စိတ်ချရသော Dental Equipments,Products များအား ဝယ်ယူအားပေးလိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Oral Care Co.,Ltd တွင် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
Carbon Brush type;Digital Control and Displayer (25,000 rpm) .Easy Potable Design and Slim model .About9hours using time by full charging . Portable Dental Micromotor သည် သေသပ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြံ့ခိုင်ပြီး သုံးစွဲရန်လည်းလွယ်ကူသည့်အပြင် ကြာရှည်အသုံးခံစေပါသည်။သေသပ်ခိုင်ခံ့သော၊ယုံကြည်စိတ်ချရသော Dental Equipments,Products များအား ဝယ်ယူအားပေးလိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Oral Care Co.,Ltd တွင် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
MicroNX specializes in manufacturing micromotor handpieces for dental labs. With our products exported to 25 countries around the world, we are the leader in micromotor handpiece technology. MicroNX provides the highest quality micromotor handpieces in various models and specifications to meet the detailed needs of our customers. With our micromotor handpieces having undergone the strict testing standards of the Korea Testing Laboratory (KTL). MicroNX Brushless Type သည် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံးပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူများအားအထူးစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိနိုင်စေပါသည်။သေသပ်ခိုင်ခံ့သော၊ယုံကြည်စိတ်ချရသော Dental Equipments,Products များအား ဝယ်ယူအားပေးလိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Oral Care Co.,Ltd တွင် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
Filming in coordination with dental film with intensifying screen by making use of 5mA X-ray output capacity. Compared with 7mA-10mA dental unit in the world, X-ray radiation dosage has reduced by 92%-98% to protect health of patients. The scattering or leaking x-ray dosage in the air where one meter away from radius of shining center is lower than 4% of defined limited value to protect health of doctors.The clearest image can be acquired by making use of microfocus x-ray tube.Using microcomputer controller, which is very convenient and accurate. Only according to relative standard picture, the best exposure control can be reached. It has infrared remote control and linear control and the direction and anti-interference of infrared remote control are strong.It has flexible and firm suspending arm to adjust ball tube freely to any angle or direction and balance in any position. သေသပ်ခိုင်ခံ့သော၊ယုံကြည်စိတ်ချရသော Dental Equipments,Products များအား ဝယ်ယူအားပေးလိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Oral Care Co.,Ltd တွင် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
The light spot will not effect to the light-sensitive resin.Graceful appearance molding just like the pretty girl’s eys, it was appeared in top grade, cause of the reasonable install by six lens.The handle can be used by your own angle habit, removable handles and easy to mount and dismount.Free movement of3axises, positioning the light to where you want. ဆေးရုံ၊ခွဲစိတ်ခန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းရန်လည်းလွယ်ကူကာ အလွယ်တကူဖြုတ်နိုင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ု ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် VIP Dental Trading တွင် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချပေးပါသည်။
Charmfil Plus isalight curing composite resin,it has good deptyh of cure,low absorption ,excellent for esthetic tooth and filling in all cavities cases (class I-V) and its hardness and abrasion are very similar to natural teeth .Filling in vast range of anterior and posterior teeth (Class I~V).Restoration of an anterior tooth fracture.Tooth orthodontic for esthetic purpose. Charmfil Plus နှင့် အခြားသော Dental Products များအား ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် VIP Dental Trading Co.,Ltsတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ၊ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
We would like to present our newly imported dental chair.We’ve imported this chair after evaluating different kinds of dental chairs from different companies to provide you the best reliable dental chair. The parent company is well-known for its reliable, superior quality dental chairs and has been distributing dental chairs to many other countries such as USA, Germany, France, Czech Republic, Indonesia, Vietnam, Loas and so on. Although dental chairs from this company are assembled in China, all pipe line connections and tubings are imported from selected companies across the globe. အဆင့်မြင့် အရည်အသွေးကောင်းသော Dental Chairs များအား ဝယ်ယူလိုသော Customers များအနေဖြင့် VIP Dental Trading Co.,Ltd တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ၊ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
-dental low speed handpiece kit. -dental air motor. -.contra angle handpiece. -.straight handpiece. -.best quality and price. Surgical Handpiece အား (၆ )လအာမခံပါရှိပြီး (၆)လအတွင်းပျက်ခဲ့ပါက အသစ်ပြန်လည်လဲပေးပါသည်။VIP Dental Trading Co.,Ltd တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
သွားများကို ဂရုမစိုက်ပါ အသက်ကြီးလာရင် အရမ်းရုပ်ဆိုးသွားပါတယ်။ သွားများ မရှိတော့ပါက အစားစားတဲ့အခါ အဆင်ပြေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သွားများ ကြားက သွားတစ်ချောင်း မရှိတော့ရင်တောင် ရေစီးကမ်းပြိုနဲ. သွားများ အားလုံး ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလည်း သွားများ ကြားထဲမှာ စားကြွင်းစားကျန်များ ရှိနေရင် သွားပိုးစားမှု ပိုမို ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို.ကြောင့် အစာစားပြီးတိုင်း သွားတိုက်ဖို. လိုပါမယ်။ အစာစားပြီးတိုင်း သွားမတိုက် နိုင်ပါက Rocket ရဲ. Power floss ကို ဆောင်ထားလိုက်ပါ။ ✔ သွားတွင် တွယ်ကပ်နေသော သွားချေးချိုးများ၊ အမှိုက်များကို လွယ်ကူစွာ သန့်စင်နိုင်ပြီး သွားဝါ သွားညိုခြင်းမှ ကင်းဝေးစေတော့မည်! အသုံးပြုပုံ ✔ သွားဆေးစက်ထဲကို ရေထဲ့ပေးပါ spray ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် ရေပန်းထွက်လာပါမည် သွားများကို ဆေးရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင့်! ဈေးနှုန်း - 17000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
သွားတိုက်ဆေး ထည့်ခွက် ခလေးများတဲ့ အိမ်တွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ သွားတိုက်ဆေးတွေကို မကစား စေဖို. သွားတိုက်ဆေး ထည့်ခွက်လေးကို rocket တွင် ဝယ်လို. ရပြီနော်။ ကလေးတွေ ဆော့မှာကို စိုးရိတ်စရာ မလိုတော့ပါ။ သွားတိုက်တံ ထည့်ရန် ခွက်လေးကိုလည်း အပိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်း - ၅ထောင် Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...